Ny iray amin'ireo malaza indrindra '90 T.V mbola natao dia mampiseho Baywatch. Ny fampisehoana nanasongadina ny kely intricacies ny mpanara-maso eo amin'ny tora-pasika kaliforniana. Ary izao T.V fampisehoana dia fandoavam-bola finday slots finday lalao. Manana tombony Character endri-javatra, Free Spins sy famonjena endri-javatra. Vakio ny famerenana eto ambany Raha mila fanazavana fanampiny.
More ity Phone Mobile Payment Slots Game
Players afaka mipetraka amin'ny alalan'ny SMS eo amin'ny finday fitaovana rehefa milalao izany an-tserasera slot. Izany no iray amin'ireo mendrika ity fandoavam-bola finday slots finday lalao. Ankehitriny dia tokony fantatro fa tsy manasongadina slot David Hasselhoff. Indrisy, ny mpilalao fototra ny T.V seho no tonga ao ity iray ity.
Na izany aza, litera hafa toy ny Matt Brody, Neely Capshaw sy Caroline Holden dia soa ihany ankehitriny. Izy ireo ihany koa no mahaforona ampahany amin'ny avo-sarobidy marika ity slot. Hafa avo-zava-dehibe ny famonjena dia ahitana sary masina board, ny fiaramanidina Ski sy speedboat.
Special Symbols ity slot Online Machine
Zavatra tsy fandoavam-bola telefaonina finday slots lalao manana 5 reels ary 20 raikitra paylines. Misy ihany koa ny misy marika manokana. Ireo sary masina dia toy ny boriki-mifanitsy amin'ny CJ Parker. A hampiely famantarana aseho amin'ny alalan'ny famantarana sy ny Baywatch mariky ny tombony iray mifanitsy amin'ny Yellow mifandrambondrambona Light.
Mampientam-po Bonus Features In ity Phone Mobile Payment Slots Game
Misy Bonus Wheel aelezo mariky amin'ity lalao. Izany dia tombony kisary izay mahatonga ny tombony mampiavaka ity slot milina finday. Rehefa tanety telo, fara fahakeliny fanehoana an'ohatra ianao dia aelezo tsapaka mampihetsika misy tombony efatra endri-javatra.
Ny roa amin'ireo endri-javatra ireo tombony Shoot'em mini-tombony ny lalao. Ianao dia omena miaraka amin'ny bala telo ny basy basy. Ny tanjona dia ny hitifitra amin'ny roa ambin'ny folo siny ny Jak. Nahazo tombony izany endri-javatra dia hahazo valisoa ianareo sy ny siny ny Jak refills.
Ireo lafin-javatra roa hafa tombony ho mari-pankasitrahana anao amin'ny dimy na valo maimaim-poana spins. Rehefa milalao ny dimy spins maimaim-poana, dia afaka mahazo bibidia reels mba hampitombo bebe kokoa ny Fandresena. Azonao atao ihany koa ho valisoa amin'ny dity tampon-tanety rehefa milalao ny valo spins maimaim-poana manodidina.
Fandoavam-bola ao amin'ny finday io lalao slots finday manan-teny kely aminao tambin endri-javatra amin'ny tolotra. Misy Rescue Bonus Feature izay no mampandeha rehefa tanety ny Yellow mihebiheby Light Bonus mariky Na izany na tsy toerana amin'ny miraingiraingy azon'ny 5. Ianao dia hovaliana soa amin'ny fahafahana ny milalao akory va ny manaraka mini-lalao.
A CJ Parker Nolavina: Eto ianao handray kofehy ireny maimaim-poana ary izay efatra no tafiditra ny fivoaky ny marika eo amin'ny reels.
A Lifeguard Mini-lalao: Dia ho antenaina ianareo handry mpanara-maso feno fasika. Get telo mitovy litera sy handray valim-pitia.
Afaka nahatonga an'ilay bibidia ny Free Spins manodidina ny fipetrahana telo, fara fahakeliny, ampielezo fanehoana an'ohatra. Hahazo 12 maimaim-poana spins. Na izany aza, tsy misy fandresena multipliers ao amin'io fihodinana.
koa, ny Free Spins manodidina dia hitarika anareo ho tombony mampiavaka ny tsirairay ny toetran 'Baywatch. Anisan'izany ny Caroline Holden, Neely Capshaw sy Matt Brody tombony endri-javatra. Afaka mahazo bebe kokoa Free spins ary handresy rehefa milalao multipliers tombony ireo endri-javatra. Ity slot no mahafinaritra ny milalao, tena tsara dia manana sary miaraka amin'ny foto-kevitra mahazatra-mozika.